जानीराख्नुस मुख गन्हाउने समस्याले क्यान्सर पनि हुन सक्छ
निशान न्युज जेष्ठ १३, 2076
काठमाडौं । मुख गन्हाउने समस्याले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा नै नराम्रो प्रभाव पार्छ । यस्तो समस्या हुँदा मुखबाट नमीठो दुर्गन्ध आउँछ । जसले मुख र शरीर स्वस्थ छैन भन्ने स्वतः बुझाउँछ । साथै, मुख गन्हाउने समस्या भएका मानिस अलि कमजोर र मानसिक रूपमा डिपे्रसनमा हुन्छन् ।आफ्नो सास आफैँलाई नगन्हाउने भएकाले ...
थाइराइड डराउनुपर्ने रोग होइन, तर समयम...
जेष्ठ १२, 2076 काठमाडौं । थाइराइड रोग होइन यो शरीरको अत्यावश्यक एक ग्रन्थी हो, जुन घाँटीमा हुन्छ। यसले शरीरलाई चाहिने हर्मोन उत्पादन गर्छ। यो हर्मोनले शरीरलाई स्वस्थ र स्फूर्त राख्न मद्दत गर्छ। मानव मुटु, मिर्गौला, फोक्सो, हड्डी मांसपेसी लगायतका टाउकोदेखि खुट्ट...
समयमै सचेत भए किड्नी जोगिन सक्छ, नत्...
जेष्ठ ११, 2076 काठमाडौं । किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानि समयमै जानकारी लिनुहोस अनि किड्नी जोगाउनुहोस ।जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरवाही ...
महिलाले आफ्नो उमेर ३० कटेपछि यस्तो छन...
जेष्ठ १०, 2076 काठमाडौं । व्यस्त दिनचर्या, उमेरअनुसार शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तनका कारण महिलाको जीवन बढी जोखिममा हुन्छ । पुरुषभन्दा महिलामा हर्मोन बढी मात्रामा गडबड हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा महिला विभिन्न रोगबाट प्रभावित हुने गरेका हुन् । त्यसैले हरेक महिलाल...
गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने दहीको के ...
जेष्ठ १०, 2076 काठमाडौं । गर्मीको मौसम सुरु भइसकेको छ। गर्मी सुरु भएसँग शरीरमा अत्याधिक पसिना आउने भएकोले शरिरमा पानीको मात्र पनि कम हुने गर्दछ। जसका कारण शरीरले सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी पानी खपत हुने गरेको हुन्छ ।मानिसहरु गर्मीमा विभिन्न पेय पदार्थ र शरीरलाई ...
गर्मीको मौसममा नरिवल पानी अति उत्तम ह...
जेष्ठ ९, 2076 काठमाडौं । गर्मीको सिजन सुरु भइसकेको छ । यस्तो गर्मीको सिजनमा तपाईले आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त तथा शितल राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि नरिवलको पानी फाइदामन्द साबित हुनसक्छ गर्मीमा नरिवलको पानी सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ नरिवल पान...
यसकारण आउँछ अनुहारमा चाया–पोतो, यस्ता...
जेष्ठ ९, 2076 काठमाडौं, जेठ । चाया पोतोले हैरान बनाएको छ? हैरान बनाए पनि तनाव भने लिनु हुन्न । तनावले त झन् चाया पोतोको समस्या अझ बढ्छ । छालाको समस्या लिएर स्वास्थ्य जाँच गर्न पुग्नेमध्ये ९० प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत पुरुष हुन्छन् । चायापातो विशेषगरी अनुहारमा...
के तपाई ग्यास्ट्रिकबाट ग्रसित हुनुहुन...
जेष्ठ ९, 2076 काठमाडौँ। पेटमा हुने एकप्रकारको इन्फेक्सनलाई अम्लपित्त अर्थात् ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । हाम्रो पेटमा एक किसिमको एसिड (अम्ल) उत्पादन हुन्छ, जसले खाना पचाउनेदेखि खानासँगै पेटमा गएका ब्याक्टेरियालाई मार्नेसम्मको काम गर्छ । यदि पेटमा अम्ल उत्पादन बढी ...
धेरैबेर कम्प्युटर चलाउँदा आँखामा समस्...
जेष्ठ ९, 2076 काठमाडौं । धेरैबेर कम्प्युटरमा काम गर्दा वा धूलो पर्दा आँखा पोल्न थाल्छ र आँसू आउँछ । आँखामा घरिघरि हात लगाउँदा र रगड्दा पनि यस्तो समस्या आउँछ । आई ड्रप हाल्नुका अलावा अन्य केही घरेलु उपाय गरेर पनि आँखालाई आराम दिन सकिन्छ ।चिसो पानीएउटा सफा कपडाला...
तामाबाट बन्छन् यी परिकार, जानीराख्नुस
जेष्ठ ८, 2076 काठमाडौं । बाँसको तामाको तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ ? जसरी खाए पनि यो स्वादिष्ट त हुन्छ नै यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पु-याउँछ । जाडोमा तामाको सुप खानु झनै फाइदाजनक छ । खासगरी, तामे, निगालो, चोया र भालुबाँस तामाका लागि उपयुक्त ...
कुरिलो खानुहोस पिशाब पोल्ने, पेटको ट्...
जेष्ठ ७, 2076 काठमाडौं । रोचक र विचित्र कुरिलो खानुहोस पिशाब पोल्ने, पेटको ट्युमर, घाँटीमा भएको संक्रमणबाट बचाउछ । ग्रेजीमा भनिने वानस्पतिक नाम भएको कुरिलोलाइ संस्कृतमा शतावरी भनिन्छ । नेपालको मैदानी जंगल देखि लिएर चार हजार फिट देखी नौ हजार फिटको उच्च हिमाली ...
यी हुन खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदाहर...
जेष्ठ ६, 2076 काठमाडौं । सामान्यतया हामीले खानाका विभिन्न परिकार तेलमा भुट्ने क्रममा अथवा ग्रेभी बनाउन लसुनको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छौँ । लसुनले कुनै पनि खानाका परिकारहरुलाई स्वादिष्ट बनाउन सहयोग गर्छ । तर लसुनमा यति धेरै गुणकारी तत्व रहेका हुन्छन् जसले हामील...
लापरवाही गर्दा रेबिजले थाहा नै नपाई ल...
जेष्ठ ६, 2076 काठमाडौं । शुक्रराज सरुवारोग अस्पतालमा रेबिजको उपचारको क्रममा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ । कुकुरले टोकेको त हो नि, घाउ ठीक भइसक्यो, छिमेकीको कुकुरले टोकेको त हो नि भनेर बस्दा रेबिजले धेरैलाई मृत्युको मुखमा पु¥याएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा शुक्र...
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेले एक लाख ...
जेष्ठ ५, 2076 काठमाडौं । यो महिनादेखि स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने बिमितले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउन थालेका छन्।जेठ महिनाभन्दा अगाडि स्वास्थ्य बिमा आबद्ध हुनेले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै उपचार सुविधा पाउँदै आएका थिए।स्वास्थ्य बिमा बोर्डका...
किन आजभोली छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरह...
जेष्ठ ५, 2076 काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष इंग्ल्यान्ड र वेल्समा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् । किन त ?सन् १८३८ मा रेकर्ड राख्न थालिएदेखि प्रत्येक वर्ष च्याँ गर्ने शिशुमा छोराकै संख्या बढी छ ।यो एक वर्षको मात्र कुरा हैन । रानी भिक्टोरियाको शासनकालदेखि नै छोरीह...
← अघिल्लो 12…78910 11 12 13 14 15 … 65 66 पछिल्लो →